A New W Hotel wakatora Centerstage paRUNWAY, Vhenekesa iro Guta uye ufambe pamusoro peMwedzi, chete muChangsha
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » A New W Hotel wakatora Centerstage paRUNWAY, Vhenekesa iro Guta uye ufambe pamusoro peMwedzi, chete muChangsha
China Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau
"W Changsha inoratidzira hotera yechisere W kuvhura kuChina, imwe yemisika ine mukurumbira pakufamba nemabhizinesi, uye tinofara kuunza W Mahotera kune dzimwe nzvimbo munyika," akadaro Tom Jarrold, Global Brand Leader. W Hotels Pasi Pose. "Maguta akadai seChangsha, nevagari vemo vane tarisiro yeramangwana uye musika uri kukura nekukurumidza wemireniyumu vanoshuva izvo zvitsva nezvisingatarisirwi, inhandare dzekutamba dzisina mukana weW."
Remangwana remahotera richangovhurwa izvozvi.
W Mahotera Pasi Pose yakagadzirirwa kuvhenekesa guta guru uye guta hombe mudunhu reHunan, China, nekuvhurwa kwanhasi kweW Changsha.
Yakagadzirwa neHunan Yunda Industry Group, W Changsha, hotera yacho inoratidza mweya wakajeka weguta remangwana uye rakasiyana-siyana rine dhizaini inokanganisa uye yekutamba yakafuridzirwa nenzvimbo yekufamba.
Inowanikwa nyore, W Changsha iri mukati memaminetsi makumi matatu kuenda kuChangsha Huanghua International Airport, maminetsi gumi nemashanu kuenda kuChangsha South Railway Station, uye inosangana yakananga kuBeijing-Hong Kong-Macau Expressway. Yakagadzirwa neyakakurumbira Cheng Chung Dhizaini (HK) Ltd, W Changsha anotora fungidziro nenjodzi nekushinga mafomu matsva ekugadzira kupemberera nhaka yakafuma yeChangsha uye zvazvino. MuChina, Changsha inozivikanwawo se "Star City" uye zita rayo rinokurudzira rondedzero yehotera iine yakashinga geometric mapatani akasanganiswa neazvino avant-garde mifananidzo. Inotumirwa chete nehotera, mifananidzo ye whimsical senge Schrodinger's Cat nhevedzano uye kuisirwa hunyanzvi hweZeta kunoongorora chakavanzika chechisiko kuburikidza neiyo W lens, ichigadzira kusangana kusingatarisirwe muhotera yese.
Pakusvika paW Changsha, vashanyi vanokwaziswa neiyo iconic W logo, yakavhenekerwa kuti ifanane nepamusoro pemwedzi. "Avenue of the Stars," yakavhenganiswa-midhiya nzvimbo inosanganisa dhijitari, inofambidzana, uye hunyanzvi hunyanzvi, inotakura vashanyi kuenda kuRUNWAY, nzvimbo yekuenda kuImba Yekugara, siginecha yechiratidzo, inofambiswa nerunyararo panzvimbo yekugara yehotera. Pano, iyo "Pepper Man" chivezwa chinokoka vashanyi kuti vatarise kumusoro uye vashamise patsva kushamisa kwenzvimbo mukati mechimiro chetsika nemagariro eChangsha.
W Changsha Kusvika, Kurarama Kamuri, RUNWAY
Makamuri evaenzi makumi matatu nemazana matatu nemakumi mashanu nemakumi mana emahotera anopa hupfumi hwazvino uye zvigadzirwa zvehunyanzvi, ane madziro anoratidza mapuraneti, mapoka enyeredzi, uye kuwanikwa kweiyo nebulae kuburikidza ne "meow eye cabin" LED skrini inoteedzera kuongorora nzvimbo. Kubva 345th uriri kusvika kune yepamusoro soro pa28th, iyo nhatu-nyaya-yakanyanyisa - WOW Suite (iyo brand inotora pamutungamiri wenyika) inosanganisira anopfuura chiuru mita metres yekugara uye yekuzorora nzvimbo, kusanganisira bindu rakavanzika nedziva rekushambira, kugadzira nzvimbo inoyemurika yezviitiko zvakavanzika zvakawedzeredzwa ne siginicha sehotera.
W Changsha anovimbisa kuve nyowani yekudyira nzvimbo yekudyira veko nemaresitorendi matatu uye bara yekuenda. ZVAKAITIKA, hotera yacho yemazuva ese yekudyira, inopa chiitiko chinonyudza nekicheni-yakavhurika kicheni inopa chikafu chemuno nevekunze. SHINN YEN anopemberera tsika yaChangsha kuburikidza nekudyira nehunyanzvi, neine hupenyu hupenyu nzira yekuHunanese chikafu chinoratidza zvinonhuwira zvemudunhu. Manheru ega ega, inoratidzira mhenyu kabaret inoratidza yakasanganiswa neHunan yechinyakare opera inowedzera hupenyu hwechiitiko chekudya. Husiku, RUNWAY ndiyo nzvimbo yekuenda kuhotera uko vese vashanyi vanotora nzvimbo yepakati kuti vaone uye vaonekwe. Bhawa rinovhenekera nemitambo yemumhanzi inovhenekera iyo inowirirana zvakakwana nemaoko akagadzirwa nemaoko uye kurumwa kwechiedza.
Zviitiko Penya Penya paW Changsha
Iine anopfuura chiuru mita metres yenzvimbo yekushandira mumakamuri mashanu anoshanduka, W Changsha inopa mikana isinga ganhurike yekutora zvese basa nekuungana kwevanhu. Mune foyer, grafiti uye pop art "Fist Bump" chivezwa - kuratidzwa kwepasirese kukwazisa zvine hushamwari - kwakamirira vashanyi sezvavanosangana pamberi pechinhu chakasimba. Imba yega yega yemusangano ine mabasa mazhinji uye yakashongedzwa neazvino tekinoroji yeaudio tekinoroji yakashandisirwa kune chaiwo zviitiko zvechiitiko. Pakati pemisangano, vashanyi vanogona kutora zororo naW Recess, yekutanga hotera inotora zororo rekofi nechinwiwa chakasiyana uye kusarudzwa kwezvikafu zvakagadzirirwa kukwidziridza chero chiitiko.
DETOX. KUDZORA. Dzokorora.
Mushure mebasa kana kutamba, vaenzi vanogona kukanda-kumashure nedziva rekuratidzira kana kuita splash paWET®, iro rakakura dziva rine matatu-mita 'Space Cat' chivezwa. Iyo 24/7, yakazara-yakagadzirirwa FIT fitness centre inopa zviremera uye cardio pamwe nemoyo-kupomba matambi emakirasi ekupisa macalorie mutambo usati watanga zvakare. Kune vashanyi vanogara nechiratidzo 'Detox.Retox.Repeat' uzivi, AWAY SPA inomirira kudzoreredza uye kumutsidzira kupenya kwavo.
"Tinofara kutanga zita reW W hotera pakati peChina nekumaka imwe nhanho yekufananidzira kwatiri apo patinoramba tichiwedzera mari yedu yepamusoro mumisika mitsva munyika yose," akadaro Henry Lee, Mutungamiri, Greater China, Marriott International. "Sezvo kufamba mudzimba kuri kuramba kuchikura zvakanyanya, tiri kuunza mabrugwa matsva uye anonakidza akadai seW kunzvimbo dzekuzorora dziri kubuda munyika."
Kuti uwane rumwe ruzivo kana kugadzira, shanya wchangsha.com.